Globecast သည် TechTV နှင့် ပူးပေါင်း၍ အာရှလူနေမှုအဆင့်အတန်းမြင့်သော TechStorm ရုပ်သံလိုင်းကိုအာရှတွင်ဖြန့်ချိမည် NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show ၏ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » Globecast အာရှအတွက် HD ကိုလူနေမှုပုံစံစတဲ့ရုပ်သံလိုင်း TechStorm စတင်ရန် TechTV နှင့်အတူမိတ်ဖက်
Globecast, မီဒီယာများအတွက်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဖြေရှင်းချက်ပေးသူ, က၏ပစ်လွှတ်မှုအတွက် TechTV နှင့်အတူပူးပေါင်းထားပြီးကြေငြာခဲ့သည် HD ရုပ်သံလိုင်း TechStorm, ရှိသမျှသူတို့ကိုဖြစ်ပျက်ဖန်ဆင်းတော်မူသောလုပ်ငန်းရှင်များ၏အအေးဆုံးဆန်းသစ်တီထွင်မှုများနှင့်ပုံပြင်များအကြောင်းကိုအသစ်တစ်ခုကိုဒစ်ဂျစ်တယ်လူနေမှုပုံစံစတဲ့ရုပ်သံလိုင်း။ အဆိုပါရုပ်သံလိုင်းအာရှတစ်လွှားစတင်များနှင့်စင်္ကာပူမှာနေတဲ့အဓိကကျသည့်လစာ-TV ကို platform ပေါ်တွင်စပိုင်းတွင်မရရှိနိုင်ပါသည်။
လိုအပ်လျှင်တည်းဖြတ်ခြင်းနှင့်လိုက်နာမှုထွက်သယ်ဆောင်နှင့်အတူ Globecast, channel ကိုတည်ဆောက်ဖို့အတွက်သီချင်းစာရင်းကိုနဲ့ content ကိုလက်ခံရရှိအပါအဝင်အပြည့်အဝပလေးအောက်န်ဆောင်မှု, ထောက်ပံ့အကြောင်းအရာကိုပြင်ဆင်နေသည်။ အဆိုပါရုပ်သံလိုင်းပြီးတော့ဖြန့်ဖြူးဘို့ MEASAT-3 မှ Globecast အားဖြင့် uplinked ဖြစ်ပါတယ်။
TechStorm အာရှ, ကနေတဆင့်ဖြတ်ပြီးလစာ-TV ကိုပလက်ဖောင်းများပေါ်တွင် ပို. ပို. ရရှိနိုင်ပါလိမ့်မည် IPTV, cable DTH (တိုက်ရိုက်-to-နေအိမ်) နှင့် OTT လစာ-TV ကိုန်ဆောင်မှု။ TechStorm အဆိုအရက "သူတို့အမှန်တကယ်လာအောင်နှိုးဆွအသစ်ရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်းနှင့်စိတ်လှုပ်ရှားကွဲပြားခြားနားစျေးကွက်နှင့်အတူမယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်တီထွင်မှု, gadgets နှင့်လုပ်ငန်းရှင်များ၏ပုံပြင်များပေါ်တွင်မီးမောင်းထိုးပစ်ရန်အထပ်ထပ်လို့ဆိုချင်ပါတယ်စျေးကွက်ဝယ်လိုအားတွေ့ဆုံခဲ့သည်။ "
ဒက်ဘီလီ TechStorm ၏တည်ထောင်သူ, ကျနော်တို့မီဒီယာဝန်ဆောင်မှုကိုပေးသွင်း၏စည်းကမ်းချက်များ၌အလွန်ဂရုတစိုက်စျေးကွက်စူးစမ်း "ဟုပြောသည်။ ကျနော်တို့ဖန်တီးခြင်းနှင့်လေးလည်းအကြောင်းအရာနှင့်အာရှပရိသတ်ကို၏ပင်ကိုအရသာများနှင့်ဦးစားပေးနားလည်ကျွမ်းကျင်သူများဖြစ်ကြသည်။ Globecast စှာအတွေ့အကြုံရှိသည်နှင့်လုံးဝကြှနျုပျတို့လိုအဘယ်အရာကိုနားလည်နိုင်သည်။ task ကိုရန် Globecast အသင်းရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုနှင့်အပျနှံအားလုံးတစ်ခုတည်းပေးသွင်းသူထံမှ, န်ဆောင်မှုတစ်ခုပြောင်းလဲနေသောသေးကြံ့ခိုင် suite ကိုပေး, လေးစားဖွယ်ပါပဲ။ "
စတီဖင် Lee ကအမြဲတမ်းအရောင်းဌာနမှူး, Globecast အာရှ, TechStorm စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အယူအဆဖြစ်ပါတယ်ကျနော်တို့က၎င်း၏ပစ်လွှတ်နှင့်ဖြစ်ပွားနေသောအောင်မြင်မှုများအတွက်နည်းပညာဆိုင်ရာမိတ်ဖက်အဖြစ်ရွေးချယ်ခဲ့ကြရန်အလွန်ကျေနပ်နေ "commented ။ ကျနော်တို့ဟာသူတို့ရဲ့လိုအပ်ချက်နှင့်ဒေသတွင်းဖြတ်ပြီးအော်ပရေတာများ၏လိုအပ်ချက်များနှစ်ဦးစလုံးနားလည်ရန်၎င်းတို့၏အသင်းနှင့်အတူနီးကပ်စွာအလုပ်လုပ်ကိုင်, စျေးကွက်မှ channel ကိုရောက်စေဖို့နည်းပညာများနှင့်ကျွမ်းကျင်မှုများကျယ်ပြန့်အသုံးပြုနေသည်။ "
Aurora ကနျြးမာရေးကင်ပိန်း / ကိုလိုနီထောက်ခံ အာရှတိုက် ထုတ်လွှင့်-လူမှုမီဒီယာ ထုတ်လွှင့်-SocialMedia ထုတ်လွှင့်-SocialMeida ရုပ်သံလိုင်းဖြန့်ဖြူး ဘော့ကုဒ်မြှပ်သွင်းကိရိယာ တည်းဖြတ်ခြင်း ဂရေဟမ်ချပ်မန်း Prmoted toEditor မီဒီယာစီမံခန့်ခွဲမှု OTT ပလေးအောက် SJGolden - ကိုလိုနီခေတ် ကိုလိုနီခေတ် - သတင်း ကိုလိုနီ / ချီကာဂို က Ultra HD ဖိုရမ် 2019-04-17
ယခင်: ဗီဒီယိုထုတ်လုပ်ခြင်းညှိနှိုင်းရေးမှူး / ပြန်ကြားရေးဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီအင်ဂျင်နီယာချုပ်